नजाव र मेरियमको गिरफ्तारीले पाकिस्तानको राजनीतिमा कस्तो असर पर्ला ? - Deshko News Deshko News नजाव र मेरियमको गिरफ्तारीले पाकिस्तानको राजनीतिमा कस्तो असर पर्ला ? - Deshko News
नजाव र मेरियमको गिरफ्तारीले पाकिस्तानको राजनीतिमा कस्तो असर पर्ला ?
भ्रष्टाचार आरोपमा पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री नवाज शरिफलाई १० र उनकी छोरी मरियम शरिफलाई सात वर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ । फैसला सुनाइएका बेला नवाज पत्नीको उपचारका क्रममा बेलायतमा थिए ।
सजाय सुनाइएको भएपनि नवाज छोरीसहित शुक्रबार राति पाकिस्तान पुगे । तर, उनी छोरीसहित पक्राउ परेका छन् । उनलाई पक्राउ गर्नेक्रममा नवाजको पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाजले आफ्ना नेतालाई पक्राउ गरेको भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेको थियो । केहीबेर तनावको स्थिति पनि सृजना भयो ।
१० हजार सुरक्षाकर्मी तैनाथ
शरीफलाई लाहौर पुर्याउनुभन्दा पहिले सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको थियो । विमानस्थलमा नवाज पार्टीका कार्यकर्तालाई भित्रिन नदिन सबै नाकामा कडाई गरेको थियो । तर, पनि सुरक्षाकर्मीए र नवाज समर्थकबीच झडप भएको छ ।
लाहौरका कैयौं शहरमा समेत झडप भएको छ । पञ्जाब सरकारले लाहौरमा मोबाइल र इन्टरनेट सेवा बन्द गरेको थियो । प्रहरीले नवाजका तीन सय कार्यकर्तालाई पक्राउ गरेको छ ।
२०१७ मा पनामा पेपर स्क्याण्डलमा नाम आएपछि नवाज शरिफ जुलाई, मै प्रधानमन्त्री पदबाट राजिनामा दिएका थिए । अनुसन्धानबाट शरिफ र उनकी छोरीमाथि मुद्दा चलाइएको थियो ।
पाकिस्तानमा २५ जुलाईमा आम चुनाव हुँदैछ । स्रोतकाअनुसार गिरफ्तारपछि नवाजले कारमा जान अस्विकार गरेका थिए । उनलाई पार्टी कार्यकर्ताले थाहा नपाउने गरि राख्ने तयारी गरिएको छ ।
नवाजको पार्टीले बनाउँदै नयाँ रणनीति
नवाज शरिफलाई स्वागत गर्न उनको पार्टी पीएमएल–एन समर्थको भीडलाई विमानस्थलमा जान रोक लगाइएको थियो । जुन पार्टीको अध्यक्ष नवाजकै भाई शाहबाज शरिफ छन् ।
अहिले देशका विभिन्न टाउँमा पार्टीको नेतृत्वमा विरोध प्रदर्शन गरिएको छ । र्याली सकेर पार्टीले नयाँ रणनीति बनाउने तयारी गरेको छ ।
अर्कोतर्फ नवाज शरिफ पाकिस्तान पुग्नुअघि चुनावी र्यालीमा बम हमलामा कैयौंको मृत्यु भएको छ । यसले पाकिस्तानको राजनीतिमा निकै ठूलो असर पुग्ने देखिएको छ ।
शरिफमाथि भ्रष्टाचार गरेर बेलायतमा २ आलिशान फ्याट खरिद गरेको आरोप लगाइएको छ । यो मामलामा पाकिस्तानको काउन्टेबिलिटी कोर्टले १० साल जेल सजाय सुनाइएको छ भने उनकी छोरी मरियमलाई सात वर्षको सजाय सुनाइएको छ ।
यो आरोपमा उनको ज्वाईलाई पनि पक्राउ गरिएको बताइएको छ । यसका साथै नवाज शरिफमाथि करिब ७३ करोड रुपैयाँ र मरियममाथि १८ करोड रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ । एजेन्सी